Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2010
26 janoary 2009 nakana hevitra tamina roman gasy
2010-01-25 @ 21:37 in Ankapobeny
Mety tsy hampino anareo ny zavatra lazaiko saingy rehefa namaky ity boky ity aho dia resy lahatra ihany fa nakana saina tamina roman (tantara noforonina malagasy) ihany ny zava-nitranga tamin'iny 26 janoary 2010 iny. Holazaiko anareo eo ihany ny antony fa hiresaka zavatra manodidina ity tantara nampahonena teto amin'ny firenena ity ihany isika.
Tsikaritra kely tamin'ny TVM
Nijery baolina ny tena ka teo amin'ny firavana ara-dalàna nisarahana ady sahala dia nandefa vaovao kely ny vaovao an-tsarin'ny TVM. Fanararaotra hamoahana ny vaovaon'ny fitondrana tokoa ny fotoana mahavory lanona ny mpankafy baolina fandaka sahala amin'izao sady samy ekipa goavana rahateo no nifanandrina. Mialoha izany, amin'ny maha-alatsinainy ny andro dia nampahatsiahy ny zava-nisy andro alatsinainy tahaka izao tamin'ny herintaona ny televiziona, sary hafa mbola tsy nivoaka firy tamin'ny haino aman-jery samihafa. Ny famakiana sy ny rodorodo efa hitantsika taty amin'ny aterineto ihany fa ity iray ity no mbola tsy nivoaka firy.
Tovolahy iray no nitondra karazana farango vy anankiroa, nahazo ny terrasse, sady misy kiririoka teny ambavany no namaky fitaratra tranobe vaovao tamin'ny farango roa nentiny. Heno tsara ny hatezeran'ny olona sy ny fandavana tsy hanaovana ilay fomba ratsy fa tsy noraharahiany izany. Ny tsy tao an-tsain'ilay tovolahy dia nisy badge mavomavo niambozonan-dranamana. Tsy nahatsikaritra io aho fa ilay teo akaikiko no nihoraka avy hatrany ka nanaitra ahy ihany koa ny fisiany. Anisan'ny mpiandraikitra ny tolona ve ranamana io raha niambozona badge teny an-tratrany? Na tsy mety miroso aza ny famotorana tsy maintsy lazaina izay tsikaritra izay ho singa hanaovana ny fanadihadiana rahatrizay.
Tsy sahin'ny ankilany mafana fo lazaina loatra
Misy ireo olona minia mampitadidy ny maha-alatsinainy nisian'ilay androm-pisaonana teto amin'ny firenena. Tsy à l'aise loatra indray anefa ny tena mafana fo tamin'ireny tolona nataony ireny rehefa hotsarovana ity andro iray ity. Minia tsy miresaka mihitsy ry zareo raha ny alatsinainy izay aloha no lazaina fa ny talata 26 janoary 2010 no tsy fantatra hanao ahoana amin'izay ny ho resaka. Angamba hieritreritra ny ho fialana bala amin'izay adihevitra mety hitranga ry zareo saingy rano raraka tsy azo raofina intsony ireny ka aleo samy hitsakotsako izay vitany.
Ny tena mahalasa vinany koa dia toa tadiavin'ny mpitarika ny tolona hamerenana ny ara-dalàna handalovana fotsiny ihany koa ity andro fahatsiaroavana iray ity. Tena tsy manana hevitra mihitsy ve ry zareo sa tena tsy azo idirana intsony mihitsy ny ery amin'ny Auditorium Ankorondrano no tsy mba misy mari-pahatsiarovana bitika hatao amin'ity andro iray ity herintaona katroka aty aoriana? Hamela mari-pahatsiarovana ihany angamba ny tena hanamarika fa tolon'olo-tsotra no tena iaingan'ny tamin'izao fotoana izao sady tsy mbola hita ireo milaza ho mpitari-tolona amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana izany. Sa horarana ve ny fidirana ny Magro Ankorondrano? Tsy nandrenensana fanomanana mihitsy aloha fa dia an'ny tsirairay ihany angamba no manao izay tsiaro mangina ataony.
Rotaka maty paika
Hiverina amin'ny lohateny amin'izay aho. Efa hanakaiky ny roa volana sahady izay no namakiako voalohany ity tantara noforonina malagasy ity. Faralahy Idealy Soa zanany no nanoratra azy tamin'ny taona 1978 ary natonta fanindroany tamin'ny 2005. "Rotaka maty paika" no lohatenin'ny boky ary navoakan'ny Edisiona Takariva. Mbola olon-kafa ihany koa no nanoro ahy ity boky ity ary nahavariana ny Fintina nataony tany amin'ny fonom-boky farany. Izao no voasoratra:
"Fa iza hono no fahavalo? Ny Sinoa angaha? Tsia tsy ny Sinoa akory ka... Ny Karana? Tsy ny Karana akory ka... Fa iza? Ny Vazaha fotsy hoditra?... Tsia, tsy ny Vazaha hono ka... Fa iza ary? Ny Malagasy hono. Ahoana?... Ny Malagasy hono no enjehina e!... Fa iza no manenjika? Ny Malagasy ihany hoe...!
Tsitapitapitr'izay dia nanomboka ny rotaka mahery setra nanodidina ny tanàna ... Nanomboka teo dia tsy fantatra intsony ny asan'ny mpanararaotra sy ny tena vokatry ny hatezeran'ny olona... Ny hita diananenika ny tanàna izany herisetra izany... Maro ny olona no namoy ny ainy. Maro koa ny naratra. Maro ny nandositra ..."
Hatreo ihany dia tsy maintsy ho taitra ny tena hoe fa ahoana tokoa ity boky ity? Fa ny fizarana fahatelo teo amin'ny fonomboky aloha no tsy mbola nisy nanatanteraka tamin'iny tolona 2009 iny : " Lehilahy efatra... nitambatra tamin'ny lehilahy iray... efa ho torana ... mangan'ny daka sy ny vely langilangy ... "Ilazao ireo naman'ialahy fa tsy matahotra anareo mihitsy izahay... Ialahy isany no manao an'ialahy isay ho iza? ... Raha tsy tapitra tamingana ianareo tsy avelanay!"
Mazava loatra fa raha oloa niaina ny zava-nisy teto amin'ny firenena tsy maintsy ho liana tamin'izay voasoratra tao anatiny, sambany indray i Jentilisa no hamaky boky tantara noforonina. Efa ela tokoa izay. Nahavariana ny fifanandrifian-javatra! Manana pejy 154 aloha ilay boky... Fohifohy ihany. Handeha hatsidika vetivety hatrany amin'ny farany ny tantara. Toy izao no voasoratra:
"Ny tetika farany tamin'ity tetika mandoza ity dia ny fandraisan'ny tanora anjara amin'ny fihetsiketsehana. Efa vonona avokoa ny fomba hanodikodinana ny fitakian'ny tanora ka hahatonga ny fihetsiketsehana nomaniny ho fifandonana amin'ny Tafika sy ny fitondrana isan-tsokajiny ary indrindra ny fifandemena amin'ny masoivohom-pirenena vahiny eto an-toerana. Amin'izay mantsy dia ho mora foana sy ho voamarina ny fandraisan'ny miaramila vahiny anjara amin'ny korontana : Ho fiarovana ireo terantany vahiny no lazaina nefa dia hanampy trotraka ny fisavorovoroana no ahatongavany eto amin'ny Nosy. Raha ny marina dia hametraka eo amin'ny toerany ilay saribakoly efa azony antoka fa hahazoany vahana indray any aoriana any no na antony." p.153
Mahavariana ny tantara! Dia fifanandrifian-javatra fotsiny ve ny tolona 2009 sy ity roman mitondra ny lohateny hoe "Rotaka maty paika" nosoratana tamin'ny 1978 ity ary i Andry no "heros" ao anatiny?
Ny ambangovangon'ny tantara
Teto Antananarivo sy tany Toamasina ary tany Mahajanga no niseho ny tantara. Nisy olona nanakarama ireo mpanendaka sy jiolahy monina eny ambany tanàna (tetezan'i Bekiraro sy Ilanivato) handeha hamaky toeram-pivarotana maro tany Toamasina dia avy eo indray hamono olona na foko tany Mahajanga. Ankoatra ny karama dia tombony ho azy ireo ny fahazoana ny zavatra norobaina ho entiny mody any an-tranony. Ireo jiolahy ireo no tena niasa mafy tamin'ny fanaovana rotaka tao amin'ilay tantara satria ireo no mpitarika hita maso tamin'ny fibaikoana ny andian'olona nentiny handroba na hamono olona. Mandeha fiara fitaterana sahala amin'ny olon-drehetra ry zalahy jiolahy ireo hamonjy ny toerana hanatontosana ny iraka. Kitapo am-bambena kely ihany no entiny amin'izany famitana ny iraka nataony izany.
Izay mahalala ny tantara nitranga teto Madagasikara dia hahatsiaro avy hatrany ny fandrobana ny toeram-piarotana tany amin'ny bloc commercial tany Toamasina tamin'ny 1973 izay namakiana sy nandoroana ihany koa ny toeram-pivatorana an'ny Merina. Raha mitodika tamin'ny famonoana tany Mahajanga indray dia ny fandripahana ny Komoriana tamin'ny 1977 avy hatrany no ao an-tsaina. Izany hoe ny mpanoratra eto dia avy tamin'ny zava-nisy teto teto Madagasikara ihany no namboariny ho lasa tantara noforonina; nefa ilay hevitra tao anatiny hanaovana ilay rotaka indray, raha ny fijeriko azy no nakan'ny sasany hevitra ka nanaovany ny tolona 2009 ka tsy afa-misaraka amin'izany ilay 26 janoary 2009 nandrobana sy nanimbana ny fananam-pirenena sy fananan'olo-tsotra izay an'ny Malagasy (sy an'ny Shinoa koa ny manaraka noho ny CITIC sy ny Supreme Center izay Malagasy ihany no mitana ny toera-mpivarotana maro tao anatiny) fa tsy voakitika kosa ny an'ny Karana sy ny Frantsay.
Tahaka izay sy tahaka izany ilay tantara novakiako roa volana latsaka izay koa asa raha tamin'ity tantara noforonina ity tokoa no nanaovan-dry zalahy ity 26 janoary 2009 ity na sendra izay fifanandrifian-javatra nahavariana ihany ny mpanoratra. Mba ahoana kosa ny hevitrao? Raha hametraka hevitra ianao dia ataovy vakiraoka aloha izay tian-kampitaina dia ankotriho (actualiser) ny takelaka dia apetraho amin'izay ilay hevitrao fa tokony hety izy avy eo.
Jentilisa, 25 janoary 2010 amin'ny 23:44
Ny fandrika natao tamin ny tolona...
2010-01-20 @ 22:49 in Politika
Misy tohiny ny lohateny fa averiko tsara indray mandeha: "Ny fandrika natao tamin'ny tolona indray no mety hahatafavoaka azy!" Toa hafahafa ihany ilay lohateny saingy taratra avy amin'ny zavatra notantaraina tamiko ny 20 janoary 2010 no nahatonga ahy hametraka io lohateny io. Tolona ataon'ny ankolafy telo no lazaiko eto fa tsy ny an'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana.
Fiantsoana ho eny an-dalambe
Nanomboka tamin'ny Asabotsy teo dia eny Anosy indray no hanatanterahan'ny ankolafy telo ny fihetsiketsehana izay ataony. Azo lazaina fa tsara fanombohana sady nahagaga indrindra io fotoana io satria tsy noravana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso io fivoriana an-dalambe io. Ny niantsoana ny olona moa dia ny hoe hametraka ny mpikambana ao amin'ny parlemanta etsy Anosy. Fomba nenti-niantso io fa efa nazavazava ihany fa eny no hamoriana ny olona rehefa tsy ho eny Ankorondrano anatin'ny kianjan'ny ara-dalàna intsony. Tsy hisy velively izany fametrahana mpikambana izany fa fiomanana ny fahatongavan'ny mpanelanelana avy any ivelany amin'ity herinandro ity no tanjona voalohany. Malalaka sady be toerana azo ivoriana eny ka azo atao tsara ny mifindrafindra.
Hatramin'ny andron'ny Asabotsy io indrindra dia nanomboka ny nataony ihany koa ny mpanakorontana izay mazava loatra fa manaraka ny baiko hanapotehana amin'ny fomba rehetra ny tolona sy ny fanasoketana azy. Azo heverina ho olona tsy voafehy ihany koa izy ireo saingy ny zavatra efa hitako no tsy dia maharesy lahatra ahy ka milaza fa manana "atidoha" manakarama mihitsy izy ireo. Tsikaritra voalohany, hariva amin'ny enina hariva, izany hoe efa lasa adiny iray raha haingana indrindra ny mpitolona teny vao nanomboka ny fanendahana vahiny Eoropeana sy ny fitorahana fiara nataon-dry zalahy ireo. Efa taratara angaha ny baiko sy ny fanangonana an-dry zalahy ka izay vao nanaomboka ny "action" ry zalahy.
Ny andro manaraka kosa, ny alatsinainy io, dia efa tonga alohaloha sy nifangaroharo tamin'ny tena mpitolona amin'izay ry zalahy ka dia manana fotoana hanasoketana tsara ny mpitolona saingy mbola vitsy moa ka tsy voamarika loatra. Nahavariana tamin'io alatsinainy io fa na dia efa feno miaramila aza ny toerana nivoriana farany dia mbola afa-nanao ny fihetsiketsehana sy ny kabary teo ihany ny mpitarika rehefa tonga ny tolakandro. Nitombo avo roa heny noho ny Asabotsy ny hamaroan'ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nahoan'ny olona izany. Nihanitsiry ny fanantenan'ny olona fa misy zavatra mitranga matoa tsy sahy nanapoka baomba mandatsa-dranomaso ihany ny mpitandro ny filaminana teo.
Ny andro fahatelo, mpitandro ny filaminana 15 kamiao be izao miampy ireo anaty fiara tsy mataho-dalana sy fiara avy amin'ny sampana manokana (FIS) no nanemitra ny toerana. Nihabetsaka ny olona nandrangitra azy ireo amin'ny fitaovam-piadiana eny ampelatanany indrindra fa ny mpampiasa lalana noho ny fibahambahanan-dry zareo na fiedinedin'izy ireo eny afovoan'arabe. Hay efa vonona avokoa ny ekipa sy ny teknikam-pandravana ny tolona. Tany amin'ny toerana nivorivorian'ny vehivavy no nandefasan-dry zalahy ny baomba mandatsa-dranomaso iray dia raikitra amin'izay ny famotehana ny fananana iombonana teny amin'ny manodidina ka ny nivandravandra voalohany indrindra dia ny fandravana ireo sezavato teo amin'ny zaridainan'i Mahamasina. Tetika efa vita omana ireny ary olona efa voaomana no nanao azy. Ny fahadisoana nataon'ny mpitolona dia ny tsy nandrara ireo olona ireo fa namela fotsiny amin'izao. Io sy ny toratora-bato natao no nahafahan'ny mpitandro ny filaminana nandrava amin'izay ny tolona. Ny tetika ambadik'izay dia ny tsy hampazoto intsony ireo izay mbola mpankeny Anosy-mahamasina. Manginy fotsiny moa ny fahitana fa tena niova mihitsy ireo karazan'olona mandrafitra ny ankamaroan'ny mpitolona fa tsy mitovitovy intsony tamin'izay teny amin'ny kiaanjan'ny ara-dalàna Ankorondrano.
By the river on Babylone
Noheverina amin'izay fa ho lao tsy hazoto intsony ny mpitolona ny andro fahaefatra, izany hoe olona vitsivitsy tsy manaiky lembenana nefa tsy ho afa-maneho ny heviny ankahalalahana intsony no sisa ho tazana eny amin'ny manodidina an'Anosy sy Mahamasina. Nahomby tamin'ny ampahany ihany izany tetika izany fa nisy olona nanana aingam-panahy tamin'ireo tsy nanaiky lembenana ireo. Lasa nihirahira indray ny olona ka ny hiram-pivavahana (Be indray no tsy hahazaka ny filazana izany) sy ny hiram-pitiavan-tanindrazana ary ny hiram-pampihavanana toy ny "Mifankativa ihany" no nanakoako tamin'iny toerana iny. Tsaroako ilay hira malaza nataon'ny tarika Boney M fahiny, izay notsilovina avy amin'ny Fitarainan'ny Jiosy natao sesintany tany Babylona voasoratra ao amin'ny baiboly (Jeremia), rehefa reko tamin'ny Radio Fahazavana ny akony. Tsy miteny ny hamaroan'ny olona mihitsy aho eto fa ny fahasahiana nataon'izy ireo kosa. Tsy voatery hoe niara- nivorivory nifanizina tamin'ny toerana iray ireo mpihira fa niparitaka teny rehetra teny. Tsy nisy intsony ny fihantsiana ny miaramila nefa tafala tanteraka ihany koa ny tahotra ireo mampideradera fitaovam-piadiana. Nitsimoka tsikelikely tokoa ilay hoe ny Hery tsy mahaleo ny fanahy. Lasa nihatakataka indray ireo mpitandro ny filaminana efa nanatomotra dia nanatomotra teo, tsy hitany izay tokony atao. Izany no tolona ampilaminana !
Raha nandinika izany rehetra izany aho dia tonga ho azy tamin'ny fieritreretana fa hifindra lasy manoloana ny Carlton amin'izay ny mpitolona "hampiseho" amin'ny vahiny ny heviny. Efa hain'ny olona ny mifindrafindra toerana ka tsy hananosarotra ho azy ireo ny hankeny. Hay moa ka nisy antso nataon'ny mpihaino ny Radio Fahazavana iray nanao izay fanentanana izay ihany koa. Be hoaho ny mitovitovy sainina ny olona ka azo inoana fa mahafantatra avy hatrany ny tokony hataony ny tsirairay. Dia samy hanara-baovao isika hahafantatra izay mitranga amin'ity tontolo andron'ny Alakamisy 21 janoary ity.
Jentilisa, alakamisy 21 janoary 2010 amin'ny 00:55